ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ချစ်စရာ အိမ်မွေး ကြောင်ကြီးများ - Shwe Khit Online TV
HomeWorld Topကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ချစ်စရာ အိမ်မွေး ကြောင်ကြီးများ
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ချစ်စရာ အိမ်မွေး ကြောင်ကြီးများ
September 9, 2021 Yan World Top 0
ပရိသတ်ကြီးကို အခုတစ်ခါ ပြောပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာလေးကတော့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အဖြစ် သတ်မှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ချစ်စရာ ကြောင်ကြီးတွေ အကြောင်း ပြောပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် ကြောင်လေးတွေကို ချစ်တတ်သူတွေ အတွက် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကြောင်တွေ ဘယ်လောက်တောင် အကောင်ကြီးလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးထားလို့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
၁ ။ Barivel
Barivel လို့ ခေါ်တဲ့ ကြောင်လေး ကတော့ လက်ရှိ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အိမ်မွေးကြောင် အဖြစ် ဂင်းနစ် စံချိန်ဝင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Barivel ဟာ အီတလီနိုင်ငံ ၊ Pavia မှာ သူ့ရဲ့ သခင်တွေနဲ့ အတူ နေထိုင်နေတာ ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ လမ်းလျှောက်ပုံ နဲ့ ကြီးမားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံကြောင့် မြင်တဲ့သူတိုင်းက ချစ်ခင် ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီကြောင်လေးရဲ့ မျိုးစိတ်ကတော့ Maine Coon လို့ခေါ်တဲ့ ကြောင်မျိုးစိတ် အနွယ်က ဖြစ်ပြီး အရွယ်အစားကတော့ ( ၃ ပေ နဲ့ ၁၁.၂ လက်မ ) ရှိပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
Barivel ဟာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကြောင် အဖြစ် စာရင်းဝင်သွားခဲ့တာကတော့ ( ၂၀၁၈ ) ခုနှစ် မေလ ( ၂၂ ) ရက်ကပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ လက်ရှိမှာတော့ သူ့ရဲ့ စံချိန်ကို တစ်ခြား အိမ်မွေးကြောင်တွေက ချိုးဖျက်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး ။ ဒါ့အပြင် Barivel ရဲ့ အသက်ဟာ အခုမှ ( ၄ ) နှစ် ဝန်းကျင်ပဲ ရှိတာကြောင့် သူတို့ မျိုးစိတ်တွေရဲ့ သဘော သဘာ၀အရ ဆက်လက်ပြီး ကြီးထွားလာနိုင်ခြေ ရှိပါသေးတယ်တဲ့ ။ shwekhitonlinetv.com
၂ ။ Ludo
နောက်ထပ် ပြောပြပေးမှာကတော့ ကမ္ဘာပေါ်က ဒုတိယ အကြီးဆုံး အိမ်မွေး ကြောင် အဖြစ် စာရင်းဝင်ထားတဲ့ Ludo အမည်ရှိ ကြောင်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Ludo ဟာ အစောပိုင်းတုန်းက ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကြောင်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပြီး ဂင်းနစ်စံချိန်တင်တုန်းက ဆိုရင် သူ့ရဲ့ အသက်ဟာ ( ၁၃ ) ပတ်ပဲ ရှိပါသေးတယ် ။ Ludo ရဲ့ မျိုးစိတ်ကတော့ Maine Coon လို့ ခေါ်တဲ့ ကြောင်မျိုးစိတ်ကပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ၊ Wakefield မှာ နေထိုင်တဲ့ Ludo ဟာ အရွယ်အစား အားဖြင့် ( ၃ ပေ နဲ့ ၁၀.၆ လက်မ ) ရှိပါတယ်တဲ့ ။ shwekhitonlinetv.com
ဒါ့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်က တစ်ခြားကြောင်တွေထက် ကြီးတာကြောင့် Ludo ရဲ့ သခင်တွေဟာ သူနဲ့အတူ ခရီးသွားတိုင်း ခွေးလေးတွေ ထည့်တဲ့ ခြင်းထဲ ထည့်ပြီး ခေါ်သွားရပါတယ်တဲ့ ။ နောက်ပြီး Ludo ဟာ အကောင်ကြီးနေတာကြောင့် သွက်သွက်လက်လက် သိပ်မရှိပေမယ့်လည်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေတတ်ပါတဲ့ ။ ဒါပေမယ့်လည်း ရံဖန်ရံခါ အချိန်တွေမှာတော့ Ludo ဟာ တော်တော်လေး ခေါင်းမာတယ်လို့လည်း သူ့သခင်တွေက ပြောပြထားပါသေးတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၃ ။ Mymains Stewart Gilligan
တတိယမြောက် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အိမ်မွေးကြောင် အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ ကြောင်လေးကတော့ Stewart လို့ ခေါ်တဲ့ ကြောင်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Stewart ဟာ အရွယ်အစား အားဖြင့် ‌အလျားလိုက် အကြီးဆုံး ကြောင်အဖြစ် စာရင်းဝင်ခဲ့ပါသေးတယ် ။ ဒါပေမယ့် ( ၂၀၁၃ ) ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ မှာတော့ Stewart ဟာ ကင်ဆာရောဂါ နဲ့ သေဆုံးသွားခဲ့တာကြောင့် လက်ရှိ အသက်ရှင်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကြောင်စာရင်းထဲမှာတော့ မပါဝင်တော့ပါဘူး ။ shwekhitonlinetv.com
Stewart ရဲ့ အရွယ်အစားဟာ ( ၄ ပေ နဲ့ ၀.၅ လက်မ ) ရှိပြီး လက်ရှိ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကြောင်တွေ ထဲမှာတော့ သူ့စံချိန်ကို ချိုးနိုင်တဲ့သူ မရှိသေးပါဘူး ။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ၊ နီဗားဒါး မှာ နေထိုင်ခဲ့တဲ့ Stewart ဟာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကြောင်ဆိုတဲ့ စံချိန်ကို ( ၂၀၁၀ ) ခုနှစ် တုန်းက ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ( ၂၀၁၁ ) ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာပေါ်က အမြှီးအရှည်ဆုံး အိမ်မွေးကြောင် အဖြစ်လည်း ဂင်းနစ် စံချိန် တင်ထားပါသေးတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၄ ။ Arcturus Aldebaran Powers
Arcturus လို့ ခေါ်တဲ့ ကြောင်လေးကတော့ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး ကြောင် အဖြစ် ဂင်းနစ် စံချိန် ဝင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် Arcturus ရဲ့ အလျားလိုက် အရွယ်အစားဟာ ( ၁ ပေ နဲ့ ၇.၀၅ လက်မ ) ရှိတာကြောင့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အိမ်မွေးကြောင် စာရင်းထဲမှာတော့ စတုတ္ထအကြီးဆုံး ကြောင်အဖြစ်နဲ့ပဲ စာရင်းဝင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပြီး Arctrus ဟာ Savannah ကြောင်မျိုးစိတ်ထဲမှာ ပါဝင်ပြီး အကောင်လည်း တော်တော်လေးကို ကြီးပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
ဒါ့အပြင် Arcturus ရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ဟာ ပေါင် ( ၃၀ ) နီးပါးရှိတာကြောင့် တစ်နေ့ကို ပေါင်တစ်ဝက် လောက်ရှိတဲ့ အစာ တွေကို စားနိုင်ပါတယ်တဲ့ ။ နောက်ပြီး အပြင်ထွက်တဲ့အခါမှာလည်း သူ့ရဲ့ အရွယ်အစားက ကြီးလွန်းနေတာကြောင့် Arcturus ရဲ့ သခင်တွေဟာ သူ အပြင်ထွက်နိုင်ဖို့အတွက် ခွေးလေးတွေ ဝင်လို့ရတဲ့ တံခါးပေါက် အရွယ်အစား လုပ်ပေးထားရပါတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်တစ်ခုကတော့ Arcturus ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ဟာ မတ်တပ်ရပ်လိုက်ရင် တော်တော်လေး မြင့်တာကြောင့် သူ့သခင်တွေနဲ့အတူ ထမင်းစားပွဲဝိုင်းမှာ အတူတူ စားပါတယ်တဲ့ …. shwekhitonlinetv.com
၅ ။ Savannah Islands Trouble
နောက်ထပ် ပြောပြပေးမယ့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အိမ်မွေးကြောင် စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်နေတာကတော့ Trouble လို့ အမည်ရတဲ့ ကြောင်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် Trouble လေးဟာ ဒုတိယမြောက် ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး ကြောင်အဖြစ် လည်း စာရင်းဝင်ထားပါသေးတယ် ။ Savannah မျိုးနွယ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ Trouble လေးဟာ နာမည် လေးက လည်း ဆန်းသလို အစား စားပုံကလည်း ထူးဆန်းပါတယ် ။ Trouble ဟာ ကြောင်စာ တွေ စားရတာကို လုံး၀ နှစ်သက်ခြင်း မရှိပဲ ယုန်သား နဲ့ အမဲသားကို ပဲ စားပါတယ်တဲ့ ။ shwekhitonlinetv.com
နောက်ပြီး သူ့ရဲ့ သခင် ဖြစ်သူ Debby ရဲ့ ပြောပြချက်အရ Trouble ဟာ သူ စားမယ့် အစာ တွေကို နွေးပြီး ကျွေးရပြီး အရိုးတွေကို လည်း အတုံးလေးတွေ ဖြစ်အောင် တုံးပေးရပါသေးတယ် ။ ဒီလိုမျိုး အစား ကောင်းတွေ စားရလို့ Trouble ရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ဟာ ပေါင် ( ၂၀ ) ကျော် ခန့်ရှိပြီး အရွယ်အစားကတော့ ( ၁ ပေ နဲ့ ရ လက်မ ) အမြင့် ရှိပါတယ်တဲ့ ။ နာမည်က သာ Trouble ဖြစ်ပေမယ့် လူတွေ နဲ့ နေရတာ ယဉ်ပါးသလို နူးနူးညံ့ညံ့လည်း နေတတ်ပါသေးတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၆ ။ Scarlett’s Magic
အခု နောက်ဆုံးပြောပြပေးမယ့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အိမ်မွေးကြောင် စာရင်းမှာ ပါဝင်ထားတာကတော့ Scarlett လို့ ခေါ်တဲ့ ကြောင်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် Scarlett ဟာ တစ်ပြိုင်တည်းနက် ဂင်းနစ် စံချိန် ( ၂ ) ခုကို တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကြောင်မ လေးပါ ။ Scarlett ဟာ အရင်တုန်းက ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး ကြောင် အဖြစ် စံချိန် ( ၂ ) ခု ဆက်တိုက် တင်ထားပြီး ပထမ အကြိမ် စံချိန် တင်တုန်းကဆိုရင် သူမ ရဲ့ အရွယ် အစား ဟာ ပခုံး ကနေ ခြေချောင်းလေးတွေ အထိ ( ၁၆.၄၉ ) လက်မ ရှိပါတယ်တဲ့ ။ shwekhitonlinetv.com
နောက်ပိုင်းမှာတော့ Scarlett ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ဆက်ပြီး ကြီးထွားလာတာကြောင့် ပထမ တစ်ကြိမ် တုန်းက သူမ တင်ထားခဲ့တဲ့ စံချိန်ကို ထပ်ပြီး ချိုးဖျက်သွားခဲ့ပါတယ် ။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား မှာ နေထိုင်တဲ့ Scarlett ဟာ Savannah ကြောင် မျိုးနွယ်ထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ် ။ ဒ့ါအပြင် သူမ ကို မွေးထားတဲ့ သခင်တွေရဲ့ ပြောပြချက်အရ ကယ်လီဖိုးနီးယား မှာ Savannah မျိုးနွယ်ဝင် ကြောင်လေးတွေကို မွေးကြတာ အခုနောက်ပိုင်း အတော်လေးကို ရေပန်းစားနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ ။ shwekhitonlinetv.com
အခုပြောပြပေးထားတာကတော့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ချစ်စရာ အိမ်မွေး ကြောင်ကြီး တွေထဲက တစ်ချို့ကို ပြောပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလိုမျိုး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ပြောပြပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
ထူးထူးဆန်းဆန်း ဖန်တီးထားတဲ့ အနုပညာ လက်ရာကောင်းများ
လူသားတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းလို နေပေးမယ့် မှတ်ဥာဏ်အကောင်းဆုံး စက်ရုပ် (၅) ရုပ်
ဘာပဲလုပ်လုပ် ဆန်းဆန်းပြားပြား လုပ်လိုက်ရမှ သဘောကျကြသူများ